Reward Foundation မှဆုကြေးငွေဖောင်ဒေးရှင်း
ပင်မစာမျက်နှာ Reward Foundation မှဘလော့ဂ်များ
တိုင်းတစ်နေရာတည်းတွင်ပေါ်ထွန်းသောဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှဘလော့ဂ် Browse ။
24th ဇွန်လ 2022
မိဘများက အင်တာနက်ညစ်ညမ်းပုံအကြောင်း ပြောကြသည်။
6th ဇွန်လ 2022
ညစ်ညမ်းအကြောင်း ကလေးများနှင့် စကားပြောရန် မိဘများအတွက် အကြံပြုချက် ၁၂
6th ဧပြီလ 2022
14th ဖေဖော်ဝါရီလ 2022
1st ဇန်နဝါရီလ 2022
Billie Eilish သည် Porn လုပ်ငန်းကို မျက်ကွင်းညိုစေပါသည်။
16th ဒီဇင်ဘာလ 2021
Simon Bailey- ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်သည် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ်များအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုကို ဖြစ်စေသည်။
15th ဒီဇင်ဘာလ 2021
26th နိုဝင်ဘာလ 2021
25th အောက်တိုဘာလ 2021
ပြဿနာ porn အသုံးပြုမှု: ဥပဒေရေးရာနှင့်ကျန်းမာရေးမူဝါဒထည့်သွင်းစဉ်းစား
10th စက်တင်ဘာလ 2021
12th သြဂုတ်လ 2021
မာရှယ် Ballantine- ဂျုံးစ်
6th ဇွန်လ 2021
30th မေလ 2021
Online Safety Bill - ကလေးတွေကိုအရုပ်ဆိုးတဲ့ညစ်ညမ်းမှုကနေကာကွယ်ပေးမလား။
18th မေလ 2021
11th မေလ 2021
29th မတ်လ 2021
ဒေါက်တာ Casper Schmidt သည်လိင်မလိုက်နာသောလိင်အပြုအမူဆိုင်ရာရောဂါ
25th မတ်လ 2021
Facebook & စာဝှက်စနစ်
1st မတ်လ 2021
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ဘာသာစကားငါးခု - ဆက်နွယ်မှုတစ်ခု
14th ဖေဖော်ဝါရီလ 2021
9th ဖေဖော်ဝါရီလ 2021
လူမှုမီဒီယာ & စိတ်ကျရောဂါ
12th ဒီဇင်ဘာလ 2020
4th ဒီဇင်ဘာလ 2020
19th နိုဝင်ဘာလ 2020
16th အောက်တိုဘာလ 2020
20th ဇူလိုင်လ 2020
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအတွက် 'Manifesto' ကိုသုတေသနပြုပါ
16th မေလ 2020
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့သည် Porn စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းထားရန်အဓိကကတ်ကုမ္ပဏီများအားတောင်းဆိုလိုက်သည်
8th မေလ 2020
3rd ဧပြီလ 2020
2nd ဧပြီလ 2020
31st မတ်လ 2020
13th မတ်လ 2020
25th ဖေဖော်ဝါရီလ 2020
10th ဖေဖော်ဝါရီလ 2020
31st ဒီဇင်ဘာလ 2019
9th ဒီဇင်ဘာလ 2019
Tech coms ပျက်ကွက်
24th နိုဝင်ဘာလ 2019
21st စက်တင်ဘာလ 2019
30th ဇူလိုင်လ 2019
Facebook က Google က & porn နှင့် ပတ်သက်. ဒေတာ
29th ဇူလိုင်လ 2019
24th မေလ 2019
23rd မေလ 2019
Porn Harms 'အချက်အလက်အချက်အလက်
21st မေလ 2019
15th ဧပြီလ 2019
12th ဧပြီလ 2019
10th ဧပြီလ 2019
25th မတ်လ 2019
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ & porn
24th မတ်လ 2019
"Ethical porn" - ကာခေါင်းပုံဖြတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် smokescreen
23rd မတ်လ 2019
18th မတ်လ 2019
17th မတ်လ 2019
11th မတ်လ 2019
20th ဖေဖော်ဝါရီလ 2019
Chemsex နှင့် Porn
7th ဖေဖော်ဝါရီလ 2019
25th ဇန်နဝါရီလ 2019
21st ဇန်နဝါရီလ 2019
အရာအားလုံး Overthinking ရပ်တန့်ဖို့ဘယ်လို
20th ဇန်နဝါရီလ 2019
သတင်းလွှာအမှတ်7ပွဲတော် Edition ကို 2018
6th ဇန်နဝါရီလ 2019
4th နိုဝင်ဘာလ 2018
14th အောက်တိုဘာလ 2018
ရီးရဲလ် Autism သို့မဟုတ်အတု?
Pornography ၏သုံးစွဲမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုစကေးနှင့် Porn ၏သက်ရောက်မှုများကိုကြည့်ပါ
2nd စက်တင်ဘာလ 2018
3rd သြဂုတ်လ 2018
31st ဇူလိုင်လ 2018
24th ဇူလိုင်လ 2018
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူနှင့်ညစ်ညမ်းအကြား Link ကို?
22nd ဇူလိုင်လ 2018
10th ဇူလိုင်လ 2018
9th ဇူလိုင်လ 2018
SecEd အတွက် TRF
5th ဇူလိုင်လ 2018
2nd ဇူလိုင်လ 2018
1st ဇူလိုင်လ 2018
TRF 4th မွေးနေ့
23rd ဇွန်လ 2018
19th ဇွန်လ 2018
18th ဇွန်လ 2018
porn အသုံးပြုမှု Diagnosis
15th ဇွန်လ 2018
ကင်းဘရစ် Talk ကို
5th မေလ 2018
Porn ဒဏ္thာရီများ & ဆင်ခြေ
12th ဧပြီလ 2018
2nd မတ်လ 2018
4th ဖေဖော်ဝါရီလ 2018
Porn Quiting များအတွက် 50 အကြောင်းရင်းများ
24th ဇန်နဝါရီလ 2018
23rd ဇန်နဝါရီလ 2018
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်အင်တာနက် Porn ကျင့်အကြားတွင်အဆိုပါပျောက်ဆုံးနေ Link ကို
31st ဒီဇင်ဘာလ 2017
17th ဒီဇင်ဘာလ 2017
21st နိုဝင်ဘာလ 2017
13th နိုဝင်ဘာလ 2017
5th နိုဝင်ဘာလ 2017
Read ဖြစ်ရမည်: Porn ပေါ်မှသင့်ဦးနှောက်
27th အောက်တိုဘာလ 2017
ခရိုအေးရှား ယူ. ညစ်ညမ်း
25th အောက်တိုဘာလ 2017
"ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးကလေး၏ဦးနှောက်အပေါ်အရွယ်ရောက် Porn ပြဿနာနှင့်သက်ရောက်မှုနားလည်နိုင်"
9th အောက်တိုဘာလ 2017
ရေဒီယို Sputnik အပေါ် TRF
Coolidge Effect ၏ကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်ချက်
24th စက်တင်ဘာလ 2017
လိင်စွဲလမ်းနှင့် compulsive ၏ဂျာနယ်ထဲမှာ TRF
22nd စက်တင်ဘာလ 2017
အရိပ်ထဲကထုတ်: Boys နှင့်အမျိုးသားများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်ခြင်း Addressing
20th စက်တင်ဘာလ 2017
'The Coolidge Effect' ကိုကြည့်ပါ။
16th စက်တင်ဘာလ 2017
11th စက်တင်ဘာလ 2017
10th စက်တင်ဘာလ 2017
1st ကလဲ့စား Porn ခံယူချက်
6th စက်တင်ဘာလ 2017
တနင်္ဂနွေ Post ကိုပုံပြင်
3rd စက်တင်ဘာလ 2017
29th သြဂုတ်လ 2017
porn: အဆိုပါ Hidden ပျံ့နှံ့
20th သြဂုတ်လ 2017
14th သြဂုတ်လ 2017
30th ဇူလိုင်လ 2017
17th ဇူလိုင်လ 2017
ဘဝ & မရဏ၏ကိစ္စ?
25th ဇွန်လ 2017
23rd ဇွန်လ 2017
2nd ဇွန်လ 2017
23rd မေလ 2017
More porn = ကျေနပ်မှုနည်းတယ်။
15th မေလ 2017
လက်စားချေ Porn: 5-yrs ထောင်
30th ဧပြီလ 2017
29th ဧပြီလ 2017
23rd မတ်လ 2017
လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း - လေ့ကျင့်သူများအတွက်လမ်းညွှန်
လူငယျမြားမျက်နှာ Porn စားသုံးသူတွေအဖြစ်အန္တရာယ်များ
13th ဖေဖော်ဝါရီလ 2017
ချိန်းတွေ့ Apps ကပနှင့်အတူ Cupid ရှာဖွေခြင်း?
သငျသညျ 24 နာရီမျက်နှာပြင်အစာရှောင်ခြင်းဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ
31st ဒီဇင်ဘာလ 2016
2nd ဒီဇင်ဘာလ 2016
အပြစ်ရှိကြောင်းဝမ်းမြောက်ခြင်း - Jason Huxley
16th နိုဝင်ဘာလ 2016
အမျိုးအစား = "ပို့စ်" count = "4″ offset =" 124″ အမျိုးအစား = "နောက်ဆုံးသတင်းများ" orientation ကို = "ဒေါင်လိုက်" no_image = "မှားယွင်းသော" မှေးမှိန် = "မှားယွင်းသော"]